Redmi Xusuusin 9 Pro wuxuu rasmi u yahay Snapdragon 720G | Androidsis
Xiaomi waxay ku dhawaaqday laba nooc oo cusub oo ah 'Redmi 9', gaar ahaan nooca 9 Pro iyo sidoo kale Xusuusin cusub 9 Pro Max, laba taleefan oo leh astaamo aad muhiim u ah. Kala duwanaanshaha ugu weyni waxay ku jiri doonaan kamaradda iyo xawaaraha xawaaraha, wax caadi ah markay timaado kala soocida laba qalab oo isla xariiq ah.
Redmi Note 9 Pro wuxuu ku darayaa kamarad 16 megapixel selfie ah, kala bar Redmi 9 Pro Max oo ah 32 megapixels - oo tayo fiican leh -. Kaamirada ugu weyn ayaa ka yareysa 48MP ilaa 64MP. Waxay kubiirtaa 8MP module heer sare ah, 5MP macro, iyo 2MP dareemayaal qoto dheer, sida Xusuusin 9 Pro Max.
Muuqaal isku mid ah ayaa u dhacaya kan batteriga, wuxuu leeyahay 5.020 Mah, oo qiraya xamuul dhan 18W halkii uu ka ahaan lahaa 33W oo ah Pro Max. Waa wax ku dhaca wax caadi ah, laakiin tani waa wax dheeraad ah oo shirkadda ah.
Muuqaal iyo astaamo kale
Redmi Xusuusin 9 Pro wuxuu ku darayaa shaashadda 6.67 ″ LCD ee FHD + qaraarka oo ku shaqeeya isla 720nm Snapdragon 8G oo leh xawaare sare. Kudar dareeraha faraha ee mid ka mid dhinacyadiisa, marka laga reebo jirku wuxuu noqon doonaa caddeyn buufin sida caadiga ah.
El Redmi Xusuusin 9 Pro Waxay ku timaaddaa saddex midab oo kala duwan, Aurora Blue, Glacier White iyo Interstellar Black, oo ah laba nooc oo kala duwan. Waxaan ku iibsan karnaa 4 GB / 64 GB qiyaastii 155 euro ama 6 GB / 128 GB qiyaastii 190 euro, kan dambe ayaa si hufan uga mid ah kuwa la filayo inay si fiican u iibiyaan.
Moodelkan wuxuu bilaabi doonaa in lagu iibiyo bisha Maarso 17 iyada oo loo marayo goobta rasmiga ah, Gurigeyga, My Studio iyo sidoo kale Amazon ee Hindiya sida caadiga ah. Waxaa lagu iibin doonaa iyada oo loo marayo tafaariiqda wax yar ka dib iyadoo qiime lagu go'aamin doono si xor ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi Xusuusin 9 Pro wuxuu rasmi u yahay Snapdragon 720G
Taxanaha Realme 6 wuxuu imaan doonaa Yurub 24-ka Maarso